Sarudzo yeDare Repamusorosoro inobata sei mogeji? | Ehupfumi Zvemari
Dare Repamusorosoro richasangana munguva pfupi kuti riite sarudzo yekuti ndiyani achange achitarisira kubhadhara iyo Zvepamutemo Mabasa mutero Zvinyorwa zvakachengetwa. Zvekuti nenzira iyi, inozopedzisira yazivikanwa kuti vanochengeta here kana kuti kwete vanochengeta nzira nyowani yekuti ichave masangano emabhengi uye kwete mushandisi anogadzira iyi mari kana achihaya chigadzirwa ichi kutora imba. Seimwe yezvikamu zvekamuri zvakaratidzwa muna Gumiguru apfuura. Chero zvazvingaitika, chichava chisarudzo icho vanobata mogeji vachanyatso kuziva nekuti maeuro mazhinji ari panjodzi panguva ino.
Parizvino, mhedzisiro yekutanga yesarudzo iyi ndeyekuti a certain kuoma mitezo mukutengesa kwezvikwereti zvemitero nemabhangi. Zvizhinji zvezvakapihwa zvake zvakamiswa pamberi pekubhadharisa izvo zvinogona kuitika mumatare ekutonga enyika yedu. Mupfungwa iyi, zvinonyanya kucherechedzwa kuti zvigadzirwa izvi zvakambonyangarika kubva kumawebhusaiti emabhangi. Nekudaro, iyo mamogeji nyowani haakwanise kunyoreswa panguva isina chokwadi nguva ino yekutongwa iyi.
Kusava nechokwadi ndiko kuita kwekutanga kwakaitwa nesarudzo ine gakava iyi kubvira panguva ino zvanyanya kuomesa kuita mutero. Zvichida zvinotumirwa kuburikidza nehunyanzvi nzira. Nekudaro, iyi sarudzo ichave yakakosha kune vatsva vatsva vechikwereti chembare sezvo vachizokwanisa siyana nemamiriro ako zvinoenderana nesarudzo inoitwa nevakuru vematare. Kunyangwe pane zvinopesana, vanhu vanotova nechigadzirwa cheaya maitiro akabhadharwa vanofanirwa kumirira kuitira kuti kana vachizofanira kudzosa huwandu hwemutero uyu.
1 Yakakwirira kufarira chikwereti
2 Mabhangi zvinopihwa zvinonyangarika
3 Iyo Euribor inomuka zvishoma nezvishoma
4 Njodzi yekuwedzera kukwira
5 Simuka mumakomisheni
6 Kuwedzera mari
Yakakwirira kufarira chikwereti
Chero zvazviri, kune mamwe mabhengi atove nesarudzo yekukwidza mutengo kana kuti pachinzvimbo mubereko pazvikwereti zvavo zvemubiro Ndokunge, ivo vakawedzera nezvishoma zvegumi muzana muzana zvichienzaniswa neyavo yekutanga mareti. Ichi chokwadi mukuita chinoreva kuti kubva zvino zvichienda zvichakosha kuita yakakura mari yekuita contract contract. Parizvino kuwedzera kwezvinodiwa zvezvigadzirwa izvi hakusi kunoshamisa. Kana uchigadzira a 0,10% kuwedzera anenge. Izvi zvinoreva kuti iwe uchafanirwa kubhadhara mashoma mashoma ma euro muzvikamu zvepamwedzi zvemutsara wechikwereti.
Kusvika parizvino pakange paine zvikwereti zvegeji nekupararira izvo kwekutanga nguva zvaive pazasi pe1% mazinga. Kunyangwe ichi chokwadi chichifanira kuverengerwa pamutengo unodhura wemari uye iyi ndiyo mamiriro akachinja maitiro mukati mehafu yepiri yegore. Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chechokwadi chekuti vatengi vanofanirwa kuziva uye ndiko kuti kubva zvino zvichienda mberi havachawanezve misiyano inokwikwidza seyaivapo kusvika zvino. Kukwereta hakuzoite sekubatsira sezvakaita mumakore apfuura aya, ndoda mumwedzi iri kuuya uye kunyanya makore.
Mabhangi zvinopihwa zvinonyangarika
Imwe mhedzisiro yesarudzo yeiyo Dare repamusorosoro ndeyekuti yako yaunopa mogeji haisisipo mumusika, zvirinani kwemazuva mashoma kana kunyangwe mavhiki. Tichafanirwa kumirira izvo zvinotongwa nemitumbi yekutonga kuti zviongorore zvichaitika neichi chigadzirwa chakakosha kune chikamu chikuru chemhuri dzeSpanish. Kune rimwe divi, zvichave zvakafanirawo kumirira kuti uone pasi pemamiriro api ezvinhu mogeji dzinotengeswazve mushure mekuita sarudzo paMutero pane Zvakanyorwa ZveMutemo Mabasa ei mogeji.
Kuhaya mogeji mukati memazuva ano kwakanyanya kuomarara kune vashandisi vakapihwa kusagadzikana kwepamutemo kunokanganisa musika wekutengesa. Ehezve, zvakanakisa zvinopihwa zvatove zvakaoma kunyoresa uye zvinotora mazuva mashoma kuti utore sarudzo. Nekuti zvinogona kunge zviri izvo kuti panogona kutove ne kuwedzera mumakomisheni iyo inopa ichi chigadzirwa chemari. Kunze kwechikwereti chemari icho chinotengeswa nemakambani echikwereti. Vashandisi havazove nesarudzo kunze kwekuzvishongedza nemoyo murefu pamberi peichi chakasarudzika mamiriro akagadzirwa mazuva mashoma apfuura.
Iyo Euribor inomuka zvishoma nezvishoma
Chimwe chinhu chekutarisa mumazuva ano ndechekuti chiratidzo chebenchmark mune izvo zvinowirirana zviyero zvezvikwereti zvakatengwa zvakagadzira chechinomwe simuka akateedzana. Idzi inhau dzakaipa kune vese vashandisi sezvo zvichizokanganisa kubhadharwa kwemari yavo yemwedzi. Kusvika padanho uye chiyero umo izvi zvinowedzera zviri mumisika yemari. Kubva pane ino mamiriro ese, kuwedzera kweiyo quota kunogona kuve pakati pemakumi maviri nemakumi mashanu euros zvinenge uye zvichienderana nemari yawakumbira. Kunyangwe chinhu chakaipisisa pane zvavanofarira ndechekuti iyo tsika inoratidza kuti icharamba ichikwira mukati memwedzi iri kuuya.
Kunyangwe iyo Euribor ichiri mukati zvisina kunaka mazinga, kubvira 2016, shanduko yakatosvika. Parizvino iri pa - 0,145%, danho repamusoro mumwedzi mipfumbamwe yekupedzisira uye neyakajeka tsika yekuenderera ichidzikira. Izvi zvinoreva kuti mhedzisiro iyi ichaendeswa kune vashandisi avo kubva zvino zvichienda vachange vaine mari yakawandisa yemwedzi nemwedzi. Parizvino, kuwedzera kwayo hakuna kukosha zvakanyanya, asi kunogona kunge kuri mune iri kure kure remangwana kana shanduko yeiyo bhenji yekuEurope ichienderera nenzira iyi.
Njodzi yekuwedzera kukwira
Dambudziko hombe rinowanikwa nevane chikwereti chemogeji pari zvino nderekuti iyo Chiratidzo cheEurope inogona kunge iri pamatanho akanaka kwemakore mazhinji. Nekuti mamiriro aya anogona kureva mutsauko pakubhadharwa kwemutero wakakosha zvakanyanya uye kuti mukuda kwakatenderedza mazana maviri emamiriyoni euros zvinogona kureva mari yakawedzerwa padyo padyo ne200.000 euros mwedzi wega wega. Kana zvakatowanda sekukwira kwacho kwaifambira mberi kuburikidza nemwedzi Iyi ndiyo njodzi iyo vashandisi vanayo nekuda kwekunyorera inowirirana rate mogeji.
Zvikwereti zvekutenga imba pachiyero chakatarwa, pane zvinopesana, zvine mukana wakakura wekuti iwo iwoyo wemwedzi wekubhadhara unogara uchibhadharwa zvisinei nezvinoitika mumisika yemari. Nenzira iyi vanozonakidzwa ne runyararo rukuru nepo chikwereti chemogeji chichigara. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei yakamisikidzwa-rateti mogeji zvave kudiwa zvakanyanya nevatengi, sekureva kwezvazvino zvakapihwa neNational Institute of Statistics (INE). Kusvika padanho rekuti ivo vakura pamusoro pemabhangi zvavanotarisira.
Imwe yemabhenefiti akakosha pane iyo chikamu che yakatarwa rate regeji ndeyekuti ivo vakaumbwa vachiziva chekubhadhara nguva dzose. Semhedzisiro yeichi chakasarudzika hunhu, ivo vanove vari munzvimbo iri nani kuronga yavo mashandisiro uye zvirinani kubata yavo pachezvayo kana yemhuri bhajeti. Mukutsinhana nenyaya yekuti ivo havazokwanise kubatsirwa kubva pakuderera kwemutengo wemari, sezvakaitika mumakore apfuura apo zvave zvine pundutso kutora mutero unoshanduka.
Sarudzo ichatorwa neDare Repamusorosoro pamusoro pekuti ndiani achange ari mutariri wekubhadhara iyo Zvepamutemo Mabasa mutero Zvikwereti zvechikwereti zvichange zvakakoshawo nekuti zvichaona kuti mabhanga anogona kukwidza makomisheni echigadzirwa ichi chemari. Nekuti zvirizvo, ivo vanogona kuvasimudza nezvishoma zvegumi zveiyo muzana poindi zvichienzaniswa neyazvino mareti. Ichi chiitiko chekuti chikamu chakanaka chevaongorori vezvemari vanga vachinyevera nezvazvo sezvo vachitenda kuti pakupedzisira vanozove vatengi pachavo vanozofanira kutakura mari.
Kune rimwe divi, uku kuwedzera kwemakomisheni emamogeti kunogona kusimbiswa zvinoenderana nezvinodiwa zvechikwereti chega chega, mumahombekombe ekutengeserana ayo achazorora pakati peanenge 0,50% uye 2,00%. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti parizvino pane zvakawanda zvezvinhu izvi zviripo kusunungurwa kubva kumakomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutarisira kwayo. Asi semhedzisiro yemamiriro akanaka emusika uye chokwadi chekuti chimbadzo chaive padanho rakaringana rekushandisa kudzikisira uku.
Chero zvazvingaitika, pane yakajeka maitiro uye ndezvekuti mutengo wezvikwereti zvekutengesa uchakwira zvishoma nezvishoma pamusoro pemwedzi. Kunyanya pamberi pezvinoonekwa mwero wekukwira izvo zvichave zvinogadzirwa kubva gore rinouya munzvimbo ye euro. Semhedzisiro yesarudzo yeEuropean Central Bank (ECB) yekuisimudza kubva ku0% iyo yavari panguva ino. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi izvo zvakasikwa muchigadzirwa ichi chebhangi.
Izvi zvinoreva kuti kubva kutanga kwazvo, vashandisi vachazoda hukuru hwekuedza kwemari kubata iyi kirasi yezvigadzirwa. Hapana chinozove chakafanana zvakare uye matanho ekutanga ari kutotorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Sarudzo yeDare Repamusorosoro inobata sei mogeji?